Yangon Water Bus ခရီးစဉ်သစ် ဗိုလ်တထောင်-မြောက်ဒဂုံနှင့် ဗိုလ်တထောင်-စတားစီးတီး သန်လျင် လမ်းကြောင်းမျ? - Yangon Media Group
Yangon Water Bus ခရီးစဉ်သစ် ဗိုလ်တထောင်-မြောက်ဒဂုံနှင့် ဗိုလ်တထောင်-စတားစီးတီး သန်လျင် လမ်းကြောင်းမျ?
Yangon Water Bus ခရီးစဉ်သစ် နှစ်ခုဖြစ် သော ဗိုလ်တထောင် -မြောက်ဒဂုံနှင့် ဗိုလ်တထောင်-စတားစီးတီး သန်လျင်ခရီးစဉ်သစ်များကို ယခုနှစ်မိုးဦးရာသီတွင် စတင်ပြေးဆွဲ မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ငမိုးရိပ်မြစ်ကြောင်းတစ် လျှောက်ပြေးဆွဲမည့် ဗိုလ်တထောင်- မြောက်ဒဂုံခရီးစဉ်အတွက် ခရီးသည် ၆ဝ မှ ၉ဝ အကြား စီးနင်းနိုင်မည့် သင်္ဘောခြောက်စင်းနှင့် ဗိုလ်တထောင်-စတားစီးတီး သန်လျင် ခရီးစဉ်အတွက် ခရီးသည် ၁၈ဝ ဆန့် သင်္ဘောလေးစင်းဖြင့် စတင် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း Tint Tint Myanmar ကုမ္ပဏီမှ CEO ဒေါ်တင့်တင့်လွင်က ပြောသည်။
”မိုးတွင်းမှာ စတင်ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ သင်္ဘောကိုသံထည်တွေနဲ့ မဆောက်တော့ဘဲ အားလုံးကိုအလူမီနီယံတွေနဲ့ပဲ တည်ဆောက်နေပါပြီ။ ငမိုးရိပ် ချောင်းတစ်လျှောက်မှာ စီးမယ့် ခရီးသည်တွေများပါတယ်။ သန်လျင်ခရီးစဉ်က ပင်လယ်ဝဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေမဖြစ်ပေါ် အောင် ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ယင်းခရီးစဉ်နှစ်ခုအတွက် ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက် မည့်နေရာများကို ဆာဗေးများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပြီး ဆိပ်ကမ်းများကို ဧပြီလအတွင်း အပြီးသတ်တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထပ်တိုးခရီးစဉ်များဖြစ်သည့် ဗိုလ်တထောင်-မြောက်ဒဂုံ ခရီးစဉ်အတွက် ဆိပ်ကမ်း ၁၁ ခုနှင့် ဗိုလ်တထောင်-စတားစီးတီး သန်လျင်ခရီးစဉ်အတွက် ဆိပ်ကမ်းလေးခုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်နှစ်ခုအတွက် ပြေးဆွဲမည့်သဘောင်္များကို ပြည်တွင်း၌ စကာင်္ပူနိုင်ငံမှသင်္ဘော တည်ဆောက်ရေးပညာရှင်များဖြင့် ဆောက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး တည် ဆောက်မှုမှာ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီး နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အင်းစိန်-ဗိုလ်တထောင် Yangon Water Bus စီးနင်းခကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၃ဝဝ သတ်မှတ်ထားပြီး သင်္ဘောများပေါ်တွင် ကျပ် ၄၅ဝ တန်ထမင်းဘူးနှင့် ကျပ် ၁၅ဝ တန်ကော်ဖီများကိုလည်း ထည့်သွင်းရောင်းချပေးနေသည်။အဆိုပါခရီးစဉ်ကို အောက်တို ဘာ ၇ ရက်ကအခမဲ့ ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှစ၍ သင်္ဘောငါးစင်းဖြင့် တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၃ဝဝ သတ်မှတ်ပြေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်သည်။
မန်းသီတာ ဥယျာဉ်အတွင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ပြုလုပ်လိုသူများ အတွက် နေရာများခွဲခြား သတ်မှတ်ပေးထ
ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Third Party ပေါ်ထွက်လာရန် လိုအပ်